China Cylindrical ala agba Manufacturer na Supplier | Lixin
The cylindrical ala agba bụ ụdị nke iche amị, mfe iji wụnye na ebukọtala. Ndị a biarin nwere elu amị ikike. Ọhụrụ Ọdịdị imewe nke Flange na ọgwụgwụ ihu nke ala ọ bụghị nanị na mma axial amị ikike, kamakwa mma lubrication ọnọdụ nke na kọntaktị ebe n'etiti ala ọgwụgwụ ihu na Flange, na mma ọrụ arụmọrụ nke amị. Ọ nwere ike iguzogide nnukwu ibu radial ma dị mma maka ịrụ ọrụ ọsọ ọsọ, dịka nnukwu na ọkara sirs, akụrụngwa na ngwongwo, ngwongwo akụrụngwa igwe, injin ọkụ ọkụ n'ime ụlọ, ndị na-ewepụta ihe, ndị na-ebelata, igwe na-agagharị, na ibuli ma na-ebugharị igwe.
1. Ogologo Ndụ
Anakwere akara akara mbụ iji gbochie mmetọ na nsị griiz.
Nwere griiz pụrụ iche maka usoro okpomọkụ sara mbara na ogologo ndụ.
2. Ezigbo na Jụụ Ọrụ
The nkenke larịị nke anyị amị e nweela enwekwukwa iji hụ ezigbo na jụụ ọrụ.
3. Osimiri dị ala
Lower n'usoro torque site
Na mbido, anyị ga-enwe nkwukọrịta na ndị ahịa anyị n’achọ ha, mgbe ahụ ndị injinia anyị ga - arụ ọrụ kachasị mma dabere na mkpa na ọnọdụ ndị ahịa.
Na-agba ọsọ dịka ISO 9001 si dị mma, usoro mmepụta ihe dị elu, teknụzụ nhazi ọkaibe, usoro njikwa njikwa siri ike, ndị ọrụ nwere ọgụgụ isi na ndị otu ọrụaka ọhụụ, na-eme ka ebe anyị na-aga n'ihu na mmepe mmepe na teknụzụ.
Ogo njikwa (Q / C)
N'ikwekọ n'ụkpụrụ ISO, anyị nwere ndị ọrụ Q / C ọkachamara, ihe nlele nyocha na usoro nyocha nke ime, a na-emejuputa njikwa njikwa na usoro ọ bụla site na ịnweta ihe ịnweta ngwaahịa nkwakọ ngwaahịa iji hụ na ogo anyị bi.
Ejiri ụkpụrụ mbupụ na mbupụ gburugburu ebe obibi maka ebe obibi anyị, igbe ndị a na-ahụkarị, akara mmado, akara ngosi wdg. Nwekwara ike ịnye dị ka arịrịọ ndị ahịa anyị si dị.
Dị ka ọ dị, a ga-ezigara anyị ndị ahịa site na njem ụgbọ mmiri n'ihi oke arọ ya, ikuku na-enweghị ntụpọ, gosipụtara dịkwa ma ọ bụrụ na ndị ahịa anyị chọrọ.
Nke gara aga: Agịga ala agba
Osote: Bọọlụ Aluminom
Cylindrical ala agba 20x47x14
Cylindrical ala agba 25x52x15
Cylindrical ala agba 30x62x16
Anọ ahịrị Cylindrical ala agba, Cylindrical ala agba 25x52x15, Brass Ball Lelee Valve, Cylindrical ala agba 20x47x14, Obere ọla kọpa, Ugboro abụọ Ahịrị Cylindrical ala agba,